Sumad | RayHaber | raillynews
Av. Fiiri Profile buuxa ee Alper Fırat
RayHaber ku saabsan:
Sannad kasta, qaybta xadiidka xawaaraha sare, Turkey waa a sii kordhaya si ay u noqdaan hoggaamiye ee Europe. Maalgashiyada jidadka tareenada, oo ka qaada xawaaraha sare ee tareenada, waxay sii wadaan kororka. Marka lagu daro maalgelinta laga sameeyay magaalada, wax badan oo ka mid ah shirkadaha wax soosaarka gudaha ayaa dhalaalaya. Waxay ku faani kartaa in ay bilawday soo saarista xawaaraha sare ee Turkiga ee tareenka qaranka iyo sidoo kale tareenka gudaha, tareenada yar yar iyo kuwa wax soo saara tareenada. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku jirno miisaankan.
Waxaan sannado badan la shaqeynayey 7 annagoo ah suxufi hal abuur leh oo dhexdhexaad ah. RayHaber Websaydhaheenna waxay noqdeen xariir weyn oo warbaahin ah oo martigelisa celcelis ahaan 50 kun oo booqdeyaal ah maalin kasta, oo ay ku jiraan 20 kun oo news, joornaalada xaraashka maalinlaha ah iyo 30 archive sanadlaha tareenka. Ujeedadayadu waa in ay u guuraan our 100 kun oo martida maalin kasta, darajayn site ee qaranka galaan goobta ugu horeysay Turkey ee kortaan.
Suuqa tareenka ee Turkiga Xawaaruhu aad ayuu u sarreeyaa. Shirkadaha soo saarida maxalliga ah Ku darida gaadiidka maxaliga ah, LRT iyo mootooyinka, oo loo yaqaan "tareenada qaranka". Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inay u maamuus in xaaladda this.
Waxaan u shaqeyneynaa hal abuurnimo iyo wararka suuqgeynta hufan ee 7 sano. RayHaber bogga oo leh wax ka badan wararka 50.000, joornaallada maalinlaha ah iyo 20 sano ee tareenka ayaa ku guuleysta portal weyn oo leh booqdeyaasha u gaarka ah 30.000 maalin kasta. Bartilmaameedkayagu waa booqdayaasha 100.000 maalin kasta waxayna joogi lahaayeen goobaha 1000 ee liiska websaydhyada caalamiga ah.
warbaahinta: web / daabacaad daabacan
aasaasay: Imtixaanka 01.12.2011 / 01.01.2011 ayaa ku nool
News: 60.000 news, video 1700
booqashada: 30.000 khadadka / maalinta
RayHaber.com wuxuu balan qaadayaa inuu u hogaansan yahay mabaadiida saxaafadeed ee saxaafadeed iyo xuquuqaha oo dhan
Boggayaga wararka waxaa loo daabacay iyadoo la raacayo Sharciga ku Saabsan Shaqooyinka Aqoonta iyo Farshaxanka ee lambarka loo yaqaan '5846' Dib-u-daabacaadda iyo daabacaadda wararka wakaalado kasta ha noqotee waxay u baahan tahay oggolaansho qoran oo hore iyadoo la raacayo siyaasadda hayadaha ay khusayso. RayHaberqodobbada kale iyo qodobbada lagu daabacay RayHaberdib ayaa loo daabici karaa iyadoo shardi laga dhigayo in xiriir la siiyo bogga laxiriira .com. RayHaberQorayaasha ayaa mas'uul ka ah maqaalada iyo faallooyinka lagu daabacay .com.
Bartayada ayaa ah mid dhexdhexaad ah isla markaana akhristayaasheeda ku wargalinaysa dhacdooyinka iyo dhacdooyinka ka soo baxa wararka ay daabacdo ee ay sii waddo daabacaadda. Waxay ujeedadeedu tahay inay sharrax ka bixiso una soo bandhigto akhristayaasheeda iyada oo aan wax shilal ah dhicin. RayHabercontent The posted .com 100% waxaa la daabacay iyadoo la raacayo xeerarka u degsan Jamhuuriyadda Turkiga, waxaa la daabacay oo dhan cayn kasta oo images, macluumaad, iyo wararka ka milkiilaha copyright ka text saxda ah waxaa lagu daabacay by helo ogolaansho qoraal ah.
RayHaber.com, bartayada wararka, sharciga, sharciga, xuquuqda daabacaada iyo xuquuqda shaqsiyadeed waxaa ka go'an xushmeyn. Goobteenu waxay u adeegtaa sidii 'bixiye habeysan' sida lagu qeexay Sharciga 5651. Marka loo eego sharciga ku habboon, maareynta goobta kuma qasbana inay maamusho waxyaabaha sharci darrada ah. Sidaa darteed, boggeena ayaa qaatay mabda'a '' digniin iyo ka saar '. Ururrada xuquuqda lahaanshaha ee shakiga ka qaba run ahaanta wararka isla markaana dareema in shaqooyinka xuquuqda daabacadda ay si sharci darro ah u wadaagaan xuquuqdooda sharciyeedna ay ku xad gudbaan warar kasta, info @Rayhabercinwaanka boostada .com ama Foomka Xiriirka. Qareenkaaga ayaa dib u eegi doona cabashooyinkaaga iyo codsiyadaada iyo waxyaabaha loo maleynayo in lagu xadgudbay ayaa isla markiiba laga saari doonaa websaydhkeenna.
Siyaasadda Khaaska ah / Siyaasadda Khaaska ah
© Copyright 2018 RayHaber.com dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya. Nuqulada nuqul ee dhammaan noocyada ka kooban sida code, wararka, sawirrada, wareysiyada RayHaber.com. RayHaberDhamaan qoraalada, alaabada, sawirada, feylasha maqalka, muuqaallada, fiidiyowyada, naqshadaha iyo qabanqaabada goobta .com waxaa ilaaliya sharciga xuquuqda daabacaada 5846. kuwan RayHaber.com lama nuqulan karo, lama qaybin karo, lama baddali karo, looma daabici karo qaab qoraal ah ogolaanshaha qoraalka ah .com. Nuqul ama isticmaalid lama sameyn karo rukhsad la'aan ama asaga oo aan tilmaamin meesha uu ka yimid.
RayHaberXiriirimaha dibedda ee ku yaal .com waxay ku furmayaan bog kale. Qorayaasha ayaa mas'uul ka ah qoraalada la daabacay iyo faallooyinka. RayHaber.com wuu beddeli karaa waqti kasta ogeysiis la'aan. Annagu mas'uul kama nihin wixii qalad ah ee ka dhashay macluumaadka ku yaal boggan.
Macluumaadkaaga si qarsoodi ah ayaan u ilaalin doonaa. Guud ahaan, waxaan u isticmaali doonaa macluumaadkaaga gudahooda RayHaberWaxaan is barbar. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood RayHaber.com wuxuu adeegsadaa dhinac saddexaad si uu u socodsiiyo macluumaadkaaga. RayHaber.com wuxuu ubaahanyahay qeybahaan seddexaad inay si adag u waafaqaan tilmaamaheeda iyo RayHaber.com waxay u baahan tahay inaysan isticmaalin macluumaadkaaga qaaska ah. Markaad la macaamilayso RayHaber.com mar marka qaarkood waxaan helnaa macluumaad shaqsiyeed oo adiga kugu saabsan. Tusaale ahaan, haddii aad noo soo qorto warqad ama aad qorto wargeys, waad noo sheegi kartaa qofka aad tahay, sida aan kula soo xiriiri karno iyo waxa aad u maleyneyso. Markaad isticmaaleyso RayHaberAdeegyada internetka .com, waxaan isticmaalnaa cookies iyo waxaan ururinaa cinwaannada IP. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tan RayHaber.com cookies cookies qaybteena Nidaamkayaga Asturnaanta ee buuxa.
Dhammaan xiriidhada dibadeed ee ku yaal bogga ayaa ku furma bog gaar ah. RayHaber.com masuul kama aha iskuxirka dibada.